Beesha caalamka oo jawaab ka bixisay qoraalkii dowladda Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Beesha caalamka oo jawaab ka bixisay qoraalkii dowladda Soomaaliya
Beesha caalamka oo jawaab ka bixisay qoraalkii dowladda Soomaaliya
Maalin ka hor Wasaaradda arrimaha Dibadda ee Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa qoraal u dirtay Golaha Ammaanka ee Qaramada midoobay, waxayna ku baaqday in la ilaaliyo Madax-banaanida Soomaaliya, isla markaana aan wax fareglin ah lagu sameyn Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya.
Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, IGAD iyo Midowga Afrika oo ka jawaabaya hadalka dowladda Soomaaliya ayaa sheegey inay ixtiraamayaan madax-banaanida Soomaaliya, waxayna ugu baaqeen madaxda Soomaalida inay danta dalkooda ka hormariyaan danta gaarka ah, kana fogaadaan waxkasta oo keeni kara qalalaase.
Kadib kulan ay yeesheen Madaxda, Midowga Yurub, IGAD, iyo Qaramada Midoobay ayaay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda Soomaaliya marka la eego culeyska jira iyo ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya haysta, dib u dhaca doorashooyinka, iyo carqaladda sii socota ee wadahadalka u dhexeeya Dowlada Federaalka iyo qaar kamid ah madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka.
Sidoo kale waxaay Tilmaameen inay xushmad u hayaan madax-bannaanida, dhuleed , madax-bannaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya, waxayna ugu baaqeen madaxda Soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan danta guud ee qaranka Soomaaliya isla markaana si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalka si loo helo tanaasulka arrimaha taagan, iyo in la hubiyo inaan la qaadin talaabooyin wax u dhimaya xasiloonida Soomaaliya nabadda iyo amniga, waxayna soo saareen baaq 8 qodob ka kooban
1: ugu horayn waxay beesha Caalamku sheegtay in heshiiskii Sebtember 17 uu weli yahay wadada ugu macquulsan ee loo maro qabashada doorashooyin suuragal ah,, iyagoo ku booriyay Dowladda Federaalka iyo madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka inay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansaxiyaan isfahamkii Gudiga Farsamada ee 16-kii Febraayo 2021 ku shiray Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
4: Dib-u-xaqiijinta go’aanka ah in aan la taageerin wax is-barbar socda, sida doorasho hal dhinac ah ama dadaallada cusub ee keenaya in muddo kordhin la sameeyo.
5: ) In Madaxda Muujiyaan walaac culus oo laga qabo in ismari waaga siyaasadeed uu yahay mid saameyn xun ku yeelanaya nabadda, amniga, xasiloonida, iyo bad-qabka Soomaaliya.
6: Waxay ugu baaqeen hogaamiyaasha siyaasada Soomaaliya inay sii wadaan horumarka laga sameeyay dowlad dhisidda iyo siyaasad loo dhan yahay, gaar ahaan doorashooyinka iyo kala wareejinta xukunka si nabad ah , si ay maanta uga dhabeeyaan danaha muhiimka ah ee Dadka Soomaaliyeed si ay u helaan doorashooyin nabdoon, xor ah, xalaal ah, oo lagu kalsoonaan karo.
7: Waxay ku booriyeen dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay is xakameeyaan ayna ka fogaadaan ficil kasta oo u horseedi kara inay kororto xiisadda Siyaasadeed.
8: ugu danbayntii waxay baaqooda ku sheegeen in Midowga Afrika, Midowga Yurub, & Hay’adda Dowliga ah ee Horumarinta, ay sii wadi doonaan inay si dhow ula socdaan xaalada Soomaaliya.
Previous articleCiidamo gadoodsan oo saaka xirta qaar ka mid ah waddooyinka Gaalkacyo
Next articleMaamulihii hore ee madaxtooyada dalka oo la aasay